I-Borges: i-cannibal irony | Izincwadi Zamanje
Namuhla sizotshela omunye i-anecdote de Jorge Luis Borges, lapho sesikhulume kaningi khona ngezikhathi ezithile zezinye zezimanga zakhe zomphakathi, ezingaphandle kokungabaza ezisungulwe ngumuntu ojwayelekile.
Ngalesi sikhathi sikokunye ukuvela kwakhe ngesikhathi sethulwa omunye wakhe izincwadi ithanyelwe izintatheli eziningi.
Esinye sazo kwakubonakala sengathi sizimisele ngokuqhulula umoya opholile umlobi I-Argentina ... kepha intukuthelo yakhe yayiphakeme kunemibuzo yakhe futhi noma ngabe wazama kanzima kangakanani akakwazanga ukuthola uhlangothi olubi kakhulu lweBorges.
Ekugcineni waba nombono omuhle wokuzama okuthile okuqinile ukubona ukuthi ngaleyo ndlela angayenza yini intwasahlobo eshaye intukuthelo yombhali wamanoveli futhi, ingabi mfushane futhi ingavilaphi, wacaphuna okulandelayo futhi akahloniphi umbuzo kumangaze wonke umuntu obekhona.
-UMnu Borges Ngabe kuyiqiniso yini ukuthi ezweni lakini kusekhona amazimuzimu?
Esikhundleni sokulahlekelwa ukuzola, uBorges akagcinanga ngokwazi ukuthi angazibamba kanjani kodwa waphinda wakhipha lelo khono elikhulu lokusebenzisa i- i-irony bekufanele kangakanani, uphendula kanjena:
-Akusenjalo: sizidlile zonke.
Isithombe - Impi Nokuthula
Indlela ephelele ye-athikili: Izincwadi Zamanje » Literatura » Abalobi » I-Borges kanye ne-cannibalism
... ukuthola intukuthelo yombhali wamanoveli ???
Uma uzobhala futhi ushicilele, funda isilo!
Uqinisile impela embhalweni wakho, esiwubongayo: UBorges, omunye wababhali bezindaba ovelele kakhulu "wayengumbhali wezindaba ezimfishane" hhayi umbhali wamanoveli, ngoba akazange ashicilele amanoveli kepha washicilela ukuqoqwa kwezindaba.
Ngendlela efanayo engikuthokozela ngayo ukulungiswa kwakho okulungile kuze kuphele, ngicabanga ukuthi indlela oyinikeze ngayo ayinanhlonipho ngokuphelele. (Ngendlela, ngizokutshela, uma ungivumela, ukuthi iziqu zaseyunivesithi azifani nokuphelela. Mina ngokwami ​​ngineziqu ze-Hispic philology, futhi njengoba ushilo, ngibeka okuncane kule ndatshana, futhi impela ngeke kube ngukugcina engikwenzayo empilweni yami ... Ukuba nezifundo noma ukungazenzi akushiyi noma ngubani ilungelo lokwenza amaphutha, ikakhulukazi uma enawo, njengoba uqinisekisa ukuthi kuyicala lami, amandla okuvuma amaphutha ngokwemvelo nangaphandle kwezinkinga futhi aqonde ukulungiswa).
Sithemba ukukubona kaningi kuwebhu.
Kuhle, impendulo enhle kangakanani, ezimbalwa ngokwengeziwe ngesimo sakho sengqondo, bazokwenza okuhle kakhulu kulo mhlaba.